News and Activities | Office of the Auditor General of the Union
Letter To Office
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတွင် ၃-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၉:၃၀ နာရီ အချိန်တွင် ကျင်းပသော ၇၂ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ထမနဲထိုးပွဲ အခမ်းအနားအား ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညွှန်ကြာရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ နှင့် အရာထမ်း အမှုထမ်းများ တက်ရောက်ဆင်နွှဲခြင်း။
Conducting Performance and Compliance Audit on Report Writing Workshop
1. Performance Audit and Compliance Audit Report Writing Workshop, led by advisors from the Office of the Auditor General of Norway (OAGN), Mrs. Ingvild Gulbrandsen, Ms. Ann-Kristin Nymo, Mr. Anders Pilskog and Mr.
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ် ( ၁ / ၂၀၁၉ ) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် ၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ : ၀၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ် ( ၁ / ၂၀၁၉ ) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် တက်ရောက်၍ သင်တန်းဆင်းလမ်းညွှန်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
The Union Auditor General attended the 5th ASEANSAI Summit
The delegation led by U Maw Than, Union Auditor General, and Director General (Audit Department) and another participant as members, totalling three delegates, attended the 5th ASEANSAI Summit which was held in Kuala Lumpur, Malaysia from 4th to 7th November, 2019. Auditor Generals and representatives from ASEAN Countries and representatives from donor countries were present at the Summit.
အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်- ၂၃၂ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက် ၁။ ၂၁၀၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ( ၃ : ၀၀ )နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး စုပေါင်းခန်းမ၌ အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်- ၂၃၂ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်ထောင်းစုစာရင်းစစ်ချုပ် တက်ရောက်၍ သင်တန်းဆင်းလမ်းညွှန် အမှာစကားပြေားကြားခဲ့ပါသည်။
စာရင်းစစ် - ၁ များ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း အမှတ်စဉ် - ၃၅ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂ ) ရက် ၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂ ) ရက်နေ့ နံနက် ( ၁၀ : ၀၀ ) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ စုပေါင်းခန်းမ၌ စာရင်းစစ် - ၁ များ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း အမှတ်စဉ် - ၃၅ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် တက်ရောက်၍ သင်တန်းဆင်းအမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Email : HEADOFFICE@oagmac.gov.mm , AUDIT@oagmac.gov.mm, ADMIN@oagmac.gov.mm
© 2018 OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THE UNION. All Rights Reserved.